Apple ga-emepe ebe nyocha na India | Esi m mac
Apple mepee ebe nyocha na India
Ọ bụrụ na anyị niile doro anya na Apple na-ịkụ nzọ na China dị ka ahịa ọhụụ na-agbasawanye ma gosipụta nke a bụ ọtụtụ Storelọ Ahịa Apple nke meghere na China yana ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ nwere n'ebe ahụ, ugbu a ọ bụ oge ndị India. O yiri ka ụwa ọwụwa anyanwụ bụ ihe ndị si na Cupertino na-elekwasị anya na ọ bụ n'oge na-adịghị anya ka Tim Cook n'onwe ya Ọ zutere Prime Minister nke mba ahụ iji kwurịta otu Apple ga-esi daa na mba ahụ.
Ugbu a, anyị maara n'ihu ọha na Apple ga-emepe ụlọ ọrụ nyocha ọzọ dị mkpa na India iji nwee ike ịkwa ngwaahịa ya maka mkpa nke mba ahụ ọzọ kpọmkwem na niche ahịa ọ bụla ha na-achọpụta na nyocha ndị a.
Ọ bụrụ n ’ịmaghị maka ebe nyocha nke Apple nwere ugbu a nke anyị nwere ike ikwu dị mkpa, nke a ọ na-ezube imeghe n’India bụ ụlọ ọrụ nyocha mbụ buru ibu a ga-ewu na mpụga United States. Ọ ga-adị na Hyderabad, ụlọ ọrụ teknụzụ ebe nnukwu ụlọ ọrụ na-amalite itinye, n'etiti nke anyị nwere ike ịkpọ Microsoft.
Banyere ọnụọgụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ nyocha a ga-arụ, anyị ga-ekwu maka ọnụọgụ karịrị mmadụ 4.000 na itinye ego nke ga-eru ihe ruru nde dollar 30. N'ịmara ọnụ ọgụgụ ndị a, o yiri ka Apple ọ doro anya na ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na ọ ga-ekwe omume na ụwa India.. Anyị ga-anọgide na-ege ntị na-eme ka ị asian banyere nzọụkwụ na Apple na-ewere na ikwu na nke a nke. Ihe doro anya bụ na Apple chọrọ ka India bụrụ mba na-emepụta mba ọhụrụ maka ngwaọrụ ya.
Ugbu a, ihe anyị ga - eme bụ ịnọgide na - echere Isi Okwu Na - esote, nke bụ ebe anyị ga - enwe data na mmegharị ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nwere apụl bitten kwadebere maka anyị na nke ahụ agaghị ahapụ onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple mepee ebe nyocha na India
Ndị nke Cupertino na-egosi ọrụ emere na Europe
Apple Pay kwụsịrị ịrụ ọrụ ụnyaahụ maka awa ole na ole